ကေအိုင်အေနှင့် အစိုးရအကြား ခေတ်မီ နည်းပညာသုံး ဆွေးနွေးရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော် တိုက်တွန်း | ဧရာဝတီ
သာလွန်ဇောင်းထက်| January 11, 2013 | Hits:4,791
7 | | ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) ထိန်းချုပ်သည့် လဂျားယန် ဒေသတွင်းသို့ ကျရောက်လာသည့် အစိုးရတပ်မှ ပစ်ခတ်ခဲ့သော ရော့ကက် ကျည်ဆံတခုကို ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – John Sanlin)
ကချင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော စစ်ပွဲများအဆုံးသတ်ရေးနှင့် ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်ထွန်းစေရန် ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) နှင့် အစိုးရအကြား ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့် အပါအ၀င် ခေတ်မီ အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာများ အသုံးပြု ဆွေးနွေးလုပ်ဆောင်ကြရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော်က တိုက်တွန်းလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ယနေ့ နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပသော ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနား မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးသိန်းဇော်က အရေးကြီးအဆိုတရပ် တင်သွင်းခဲ့ပြီး ယင်းအဆိုမှာ KIA နှင့် အစိုးရအကြား ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး၊ စစ်ပွဲရပ်စဲရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် လက်ရှိ အခြေအနေများအရ နှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာမှု အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့များနှင့် KIA တို့အကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးမှာ ခက်ခဲနေသည့်အတွက် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်၊ အီးမေးလ် အပါအ၀င် ခေတ်မီ အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာများ အသုံးပြုဆွေးနွေးကြရန် တိုက်တွန်းလိုသည်ဟု ဦးသိန်းဇော်က ပြောသည်။
“လက်ရှိ ပကတိအခြေနေမှာ ဒေသအတွင်း စစ်ရေးတင်းမာမှု အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုအဖွဲ့များနှင့် KI0/KIA တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များမှ ကိုယ်စားလှယ်များဟာ နှစ်ဖက် မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအတွက် ခက်ခဲမှုများ ရှိနေကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ဒီနေ့ ခေတ်ကာလဟာ တာဝန်ရှိသူ ကိုယ်စားလှယ်ချင်း မျက်နှာခြင်းဆိုင် တွေ့ဆုံကြမှသာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ် နည်းပညာများအရ Video Conferencing များ၊ E-mail များ အပြန်အလှန် ပေးပို့ခြင်းများ၊ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း နှစ်ဖက် သဘောတူညီထားတဲ့ Electronic ဆက်သွယ်ရေး နည်းစနစ်များနှင့် မိမိတို့၏ မူဝါဒများ သဘောထားများ လိုလားချက်များကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သတ်မှတ်ထားသော ကိုယ်စားလှယ်များကနေ၍ ပြည်သူများ ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ထုတ်ပြန်တင်ပြ အသိပေးခြင်းများဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာသော ဆွေးနွေးမှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဦးသိန်းဇော်က ဆိုသည်။
ဦးသိန်းဇော်၏ အရေးကြီးအဆိုကို ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးက ကန့်ကွက်သူမရှိ တညီတညွတ်တည်း အတည်ပြုလိုက်ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရ ဦးရွှေမန်းက လွှတ်တော်အနေဖြင့် ကချင်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်သွားမည်ဟု သိရှိရသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးကြည်မြင့်ကမူ လွှတ်တော်အနေဖြင့် ကချင်စစ်ပွဲရပ်စဲရေး လိုလားလျက်ရှိသော်လည်း KIA နှင့် အစိုးရအကြား စစ်ရပ်စဲရေးနှင့် သဘောထားကြီး ဆွေးနွေးရေး ဖော်ဆောင်မှသာလျှင် လွှတ်တော်၏ တိုက်တွန်းချက် အောင်မြင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်သည်။
“အဓိက ကတော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် လက်တွေ့ လုပ်ကြဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ လွှတ်တော်က တိုက်တွန်းတာကို အလေးအနက်ထားပြီး KIA ရော၊ အစိုးရရော လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေးရမှာပေါ့။ မဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်က ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် မဆွေးနွေးကြဘူးဆိုရင် တကယ်နစ်နာတာက ပြည်သူတွေပါပဲ” ဟု ဦးကြည်မြင့်က ဆိုသည်။
KIA နှင့် အစိုးရအကြား ၁၈ လကျော်ကြာ ဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲများကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်တွင် ဒုက္ခသည် တသိန်းနီးပါး အိုးအိမ်များ စွန့်ခွာထွက်ပြေး နေထိုင်နေရကြောင်း၊ အစိုးရစစ်တပ်က တိုက်လေယာဉ်နှင့် ရဟတ်ယာဉ်များ အသုံးပြု ထိုးစစ်ဆင်လျက် ရှိသောကြောင့် ဒေသခံများ စိုးရိမ်ထိတ်လန့် စိတ်ဒဏ်ရာများ ရရှိနေကြောင်း ကချင်အဖွဲ့အစည်းများက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment ကချင်လေး January 11, 2013 - 6:55 pm	စိတ်ထားမှန်ပါ။သတင်းထောက်တွေ အာမချောင်ပါနဲ့။သတင်းအမှန်သိချင်ရင် ဗန်းမော်ခရိုင်ကိုလာခဲ့ပါ။တောဘက်က အတင်းစစ်သားစုဆောင်းလို့ လူငယ်မရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီ။လာရင်တော့ လူများများခေါ်ခဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ ကျွှဲနှစ်ကောင်ကြားက မြေဇာပင်တွေပါ။
Reply	uaarnandar January 11, 2013 - 10:58 pm	တိုင်းရင်းသာ ညီနောင်များအချင်းချင်း စစ်ပွဲတွေဘာတွေဖြစ်တာကို မပြောနဲ့၊ သူတပါးအထင်
အမြင်မှားလောက်အောင် အရိပ်အခြည်ပြပြီး ပြောဆိုတာတွေတောင်မလုပ်တာ ကောင်းတယ်
တယ်။ ဒါတွေမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ ပြောလိုပါတယ်။
Reply	Shwe January 13, 2013 - 5:44 am	Shut up. What is your point? Do you want the people to say nothing? The truth must be revealed. Other than that killing will keep going on. Assault on the Kachins is very very unfair and unnecessary. Instead of solving political problems with political means, guns and bullets are used. Do you think people must shut their mouth tight? Injustice from the bullies must be confronted by the people.
Reply	Lailun January 12, 2013 - 1:54 am	Dialogue broker/mediator is needed between Burmese junta and the KIO to solve political differences. Peace Talk alone is not good enough since the problem is political. The US ambassador or the British ambassador isasuitable person.
Reply	u aye January 12, 2013 - 11:43 am	BRAVO! VERY GOOD IDEA. TO STOP THE AIR BOMBING AND 150MM GUN AND ROCKET SHOOTING BATTLE, LET BOTH SIDE GENERALS BE CHATTING IN INTERNET LIKE MATCH MAKING. REALITY IS BIG ROBBER AND SMALL ROBBER ARE FIGHTING FOR TERRITORY. IT’S JUST A MAFIA WAR. NOT FOR COUNTRY. NOT FOR KACHIN AND MYANMAR PEOPLE.
Reply	သန်းသန်း January 12, 2013 - 10:44 pm	သတင်းသမား​ပြောရမှာလား အတင်းသမား​ပြောရမှာလား ဝန်ထမ်း​တွေရဲ့လာတ်​ပေးလာတ်ယူပဲ​ပြော​တော့
မိမှာပဲ အထက်ကလူ​တွေယူ​တော့ သတင်းသမား​တွေဘာလို့မ​ပြောတာလဲ အထက်ကလူ​တွေယူတာလဲ​အော်​ပေးပါအုံး​နော် အတိအကျသတင်း​တွေ​ပေးချင်တယ် ဘယ်ကိုဆက်သွယ်ရမှာလဲ အကြံအဥာက်​လေး​ပေးပါအုံး